DAAWO-VIDEO ka mid ah xogta Qaraxii Diyaarada Daalo.
Sunday February 07, 2016 - 08:03:20 in Wararka by Super Admin
Daawo:-(GN)Muuqaal cusub ayaa laga helay Qarixii Diyaarada Daalo, waana cadaymo muujinaya sida ay wax u dheceen iyo cida hawsha filisay, iyadoo dad badan loo soo xir-xiray inay lug ku leeyihiin Qaraxa Diyaarada Daalo.
Baaritaano lagu sameeyey diyaaradii Daallo Airlines AIRBUS 321 flight nambarkeeduna ahaa 3159 una socotay Djibouti, ayna saarnaayeen 74 qof oo rakaab ah iyo 7 shaqaale ah, ayaa 20 daqiiqo oo ay hawada ku jirtay kadib si deg deg ah dib ugu soo laabatay garoonka Aadan Cabdulle kadib markii uu ka dhex dhacay Qarax.
Baaritaano dheeraad ah oo ay sameeyeen khubaro Soomaali iyo kuwo caalami ah, waxay xaqiijinayaan in Qaraxii ka dhex dhacay diyaaradii Daallo Airlines uusan aheyn mid ka dhashay cilad farsamo, ee uu ahaa mid loogu tala galay in lagu waxyeeleeyo diyaaradda iyo rakaabkii saarnaa.
HALKAN KA DAAWO MUUQAALKA QARAXII DIYAARADA DAALO
Ciidamada Amniga waxay gacanta ku dhigeen dadkii lagu tuhunsanaa inay ku lug lahaayeen qaraxii ka dhacay gudaha diyaaraddaasi.
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay la socodsiineysaa dadweynaha ka dhoofa, kana soo dega garoonka Caalamiga ah ee Aadan Cabdulle lagu soo kordhin doono tallaabooyin cusub oo lagu adkeynayo amniga. Waxaana laga codsanayaa dadweynaha Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan hay’addaha ammaanka ee u heelan sugida amnigooda.